Ny toerana fanaovana lalao olaimpika: Foto-tsarin'ny foto-tsakafo
Central & South America Brezila Rio de Janeiro
Ny kianjan'i Maracanã ( Estádio do Maracanã) no iray amin'ny toerana manan-danja indrindra ho an'ny Lalao Olaimpika Summer of 2016 ao Rio de Janeiro. Io kianja goavana io dia nisokatra tamin'ny taona 1950 ho an'ny Fiadiana Tompon-daka Eran-tany FIFA ary nampiantrano ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany FIFA 2014 tatỳ aoriana, saingy nampiasaina matetika mba hananganana lalao ho an'ny ekipa mpilalao baolina an-toerana. Ny seza eo ho eo amin'ny 79.000 eo ho eo, io no kianja lehibe indrindra any Brezila ary ny faharoa lehibe indrindra any Amerika Atsimo.
Amin'ny volana Aogositra sy Septambra amin'ity taona ity, Maracanã no toerana hanaovana ny lanonana fanokafana sy famaranana ny lanonana amin'ny Lalao Olaimpika sy Lalao Olympika amin'ny 2016.
The Park Olympic
Ny valan-java-dia ao amin'ny tanànan'i Barra da Tijuca dia iray amin'ireo tetik'asa fanorenana lehibe indrindra amin'ny Lalao Olaimpika. Ny kianja olimpika no ho foiben'ny lalao, miisa 1,18 tapitrisa metatra toradroatra ary mandray ny fanatanjahantena sivy ambin'ny folo Olympika. Mbola mitohy ny fanorenana, saingy ny horonantsary vao nivoaka dia mampiseho ny fandrosoana be dia be.
Ireo toerana ireo dia ahitana ny Rio Olympia Arena, izay hampiantrano ny hetsika artistik, rhythmique ary trampoline gymnastiques; ny Velodrome, izay hampiantrano ny fifaninanana fifaninanana amin'ny bisikileta; ary ny Riocentro Pavilions, izay hitondra ny badminton, tennis, latabatra, ary ady totohondry.
Ankoatra ireo rafitra vaovao ao Barra da Tijuca, ny làlana vaovao sy ny lalam-barotra vaovao izay mampifandray an'i Rio afovoan-tanàna ho an'io tanàna kely io dia iray amin'ireo tetikasa miavaka indrindra amin'ny Lalao Olaimpika. Hanampy ny fitohanana fifamoivoizana mandritra ny lalao ary hahatonga ny fitaterana mora foana eo amin'ny toerana ho an'ny mpitsidika.
Olaimpika Golf Course
Ny fananganana sy ny fiomanana dia efa vita amin'ny Golf Course amin'ny Lalao Olaimpika mandritra ny Lalao Olaimpika 2016. Io lalana goavana io dia natsangana tao amin'ny faritra amoron-dranomasina ao Barra da Tijuca ao Rio de Janeiro manokana ho an'ny lalao. Aorian'ny lalao, ny fianarana dia lasa toerana ho an'ny daholobe hampiroboroboana ny fanatanjahan-tena any Brezila.
Ny Lagoa Rodrigo de Freitas (Rodrigo de Freitas Lake) dia miorina ao afovoan'i Rio de Janeiro miaraka amin'ny fivoaran'ny Tijuca National Forest sy Kristy Mpanavotra. Io no toeram-piofanana amin'ny hetsika fivoarana sy lakandrano. Ho fanomanana ny lalao, ny Lagoa Stadium dia nahazo tilikambo vaovao sy rafitra maromaro ho an'ny lalao Olaimpika.
Ny Guanabara Bay dia loharanom-baovao lehibe momba ny Lalao Olaimpika. Mihamitombo hatrany ny haavon'ny habakabaka ao amin'ilay toby, ary ny fampanantenana amin'ny fanadiovana ny birao dia tsy hita. Na dia efa narary aza ireo atleta taorian'ny hetsi-panoherana tao amin'ny Bay, dia mbola mitohy ihany ny hetsika. Ny Bay Guanabara dia hanome ny fifaninanana amin'ny fifaninanana.
Ny kianja filalaovan'ny lalao Olaimpika Beach ao Copacabana Beach dia mbola miorina aorian'ny fijanonana vonjimaika amin'ny fananganana amin'ny volana Jona noho ny fahazoan-dàlana tsy ampy. Nihabetsaka koa ny fanorenana taorian'ny fahasimbana avy amin'ny onja avo; Voasakana ny fanorenana avy amin'ny fiaramanidina avo ny fanakanana fasika tsy maharitra.
Rio Olympia Velodrome
Courtesy Cidade Olympica
Taorian'ny hetsi-panoherana vao haingana, ny Velodrome ao Barra da Tijuca dia toa efa vonona ny handray ireo atleta amin'ny fifaninanana mitaingina bisikileta amin'ny 2016 Summer Olympics. Ny fanorenana ity toerana ity dia vita hatramin'ny faran'ny volana Jona. Ity tranobe maoderina ity dia natsangana manokana ho an'ity hetsika ity, ary ho ampiasaina ho foibe fampiofanana ho an'ny atleta rehefa vita ny lalao.
Porto Maravilha sy ny Mozean'i Tomorrow
Alefaso mitsidika an'i Brasil
Ankoatra ny toerana fanatanjahan-tena, dia nisy tetik'asa fanorenana hafa natao tamin'ny fitarihana ny Lalao Olaimpika sy Lalao Olympika tamin'ny 2016. Ny iray amin'ireo tetikasa lehibe indrindra ao an-tanàna, Porto Maravilha, dia tetikasam-pihodinana eo amin'ny boriboritany. Anisan'izany ny arabe vaovao, tranokala ara-kolotsaina, faritra ambanivohitra, ary ny tranom-bakoka mozika .
Ny faritra manodidina ny Mozean'i Tomorrow dia hovana ho sehatra fialamboly goavambe sy fialamboly mandritra ny faharetan'ny Lalao Olaimpika. Ny lalambe Olaimpika vaovao dia hivezivezy telo kilometatra, hanome toerana ho an'ny mpitsidika hijery ny hetsika olympika rehetra amin'ny sehatra lehibe, hankafy mozika an-toerana, ary hizaha sakafo avy any an-toerana avy amin'ny karazan-tsakafo sy barotra samihafa. Mihoatra ny zato an-kira no hatao eto, anisan'izany ny fampisehoana ataon'ny mpilalao breziliana fanta-daza.
Cable Mountain Cab
Aiza ho aiza ny A-Listers mandritra ny Lalao Olaimpika
Aiza no hijanonan'ny Rio: Midi-hotely eo akaikin'ny Olympika
Ny lanonana fanokafana: ao ambadiky ny sehatra
Ny fijery tsara indrindra nataon'i Rio (sy ny fomba fijerena azy ireo)
Espaniola Karnavaly Guide
Inona moa i Thaipusam?
Ny 8 Best Coffee Mug Travel dia hividy amin'ny 2018
Top 10 Hotels in Antibes
Fiafaran'ny fahavaratra mandritra ny fahavaratra any Toronto
Tsidiho ny famakivakian'i Reno ny fifankatiavana taloha sy vaovao
Provence ho any Tuscany
Septambra 2017 Fety sy zava-nitranga tao amin'ny faritra Washington, DC
Fanasana Krismasy mandritra ny fisakafoanana any amin'ny faritra Washington, DC
Aostralia tamin'ny volana Janoary
Mandra-paharitra ve ny mandray ny pasipaoronao?